အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း: What is Steel Structure?
Steel Structure များဟာ RC ထက် ရရှိနိုင်တဲ့ Strength က ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့အတွက် ၄င်းတို့ရဲ့ member size များဟာ ပိုမို သေးသွယ်သလို weight ဟာလည်း RC ထက် ပိုနည်းပါတယ်။ ဒါကြောင် Steel Structure များဟာ Stiffness နည်းသလို Displacement လည်း များပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Steel ဖြစ်ဖြစ် RC ဖြစ်ဖြစ် member တစ်ခုကို rectangular section တစ်ခုအနေနဲ့ ယူဆရင် ၄င်းတို့ဟာ stress ဖိခံရတဲ့အခါ အများအားဖြင့် cross section မှာ I (အိုင် ပုံစံ) stress area ကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Steel Member များကို I Section တွေ့ရတာ များပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Steel Member များဟာ သေးသွယ်သည့်အားလျော်စွာ displacement များတဲ့အတွက် ၄င်းတို့ကို bracing များနဲ့ ပြန်ထိန်းပေးရပါတယ်။
ဒါကြောင့် Steel Designer များဟာ ဒီဇိုင်းလုပ်ရမှာ
၁) လုံလောက်တဲ့ working area & clearness ရရှိအောင် ကြိုးစားပေးရပါမယ်။
၂) လုံလောက်တဲ့ ventilation ရအောင် ပြောင်းလဲ နိုင်ရပါမယ်။ (bracing များ နေရာချမှုဟာ အရေးကြီးပါတယ်)
၃) bracing တွေ ထည့်ပေးရတဲ့ အားလျှော်စွာ moving area ကောင်းအောင်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်။
Steel တွေဟာ တခြား material တွေနဲ့ နှိုင်းယဉ်ရလျှင် strength to weight ratio ကောင်းလွန်းတာပါ။
တစ်နည်းအားဖြင့် weight နည်းနည်းနဲ့ strength ကောင်းကောင်းရတာပါ။ ဒါကြောင့် Steel structure များမှာ dead load & live load ratio မှာ Live load က ပိုများတာပါ။
Steel ကို အဓိက resistance ပေးရမှာကတော့ corrosion နဲ့ fire resistance ပါ
Steel တွေဟာ under atmospheric temperature မှာ serve လုပ်တဲ့အတွက် fire effect ကို အဓိက design လုပ်ပေးရပါတယ်။ Temperature တိုးလေ... steel ရဲ့ Es, Fy, Fu အစရှိတဲ့ တန်ဖိုးတွေဟာ ကျသွားလေပါ... temperature ဟာ 200'F ကျော်တာနဲ့ strength တွေဟာ အလွန်ကို ကျဆင်းသွားတတ်ပါတယ်။ Temperature 500-600'F ရောက်လာတဲ့အခါ... steel တွေဟာ concrete structure တွေလို creep တွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
Steel structure တွေဟာ lamellar tearing လို့ခေါ်တဲ့ အလွှာလိုက် ကွာထွက်ခြင်း ကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။ welding တွေရဲ့ face နဲ့ steel ရဲ့ rolling direction ဟာ အပြိုင် အဖြစ်သင့်ပါဖူး.... မဟုတ်ရင် temperature change ဖြစ်တဲ့အခါ crack တွေ ၀င်လာတတ်ပါတယ်။
Fatigue strength လို့ခေါ်တဲ့ long-term ကြာလာတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ငြောင်းအားကိုလည်း ဂရုစိုက်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Fatigue တွေဟာ bridge များမှာ commercial vehicles, good trains များကြောင့်၎င်း၊ Cranes များမှာ lifting, rolling & inertial loads ကြောင့် ၄င်း၊ offshore structure များမှာ wave ကြောင့် ၄င်း၊ slender tower များမှာ wind gusting ကြောင့် ၄င်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Steel တွေရဲ့ အဓိက ဂုဏ်သတ္တိ တစ်ခုကတော့ ductile ဖြစ်ရမှာပါ.. carbon ပါဝင်မှုနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ Steel များဟာ strength ကောင်းလွန်းရင်လည်း မကောင်းပါဖူး။ တစ်ဖက်မှာ section size လျော့ကျသွားတဲ့အတွက် stiffness ကျသွားတတ်ပါတယ်။
နောက် ဂုဏ်သတ္တိ တစ်ခုကတော့ material toughness လို့ ခေါ်ရမယ့် ပြင်းတွဲ ဆွဲကပ်စေသော ဂုဏ်သတ္တိ ဖြစ်ပါတယ်။ crack ပေါ်တာကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိ တစ်မျိုးပါ။ toughness ဟာ တစ်နည်းအားဖြင့် fracture ကို resist လုပ်ပါတယ်။
Steel Structure ရဲ့ properties တွေနဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားရပြန်ရောလေ...
Steel တွေရဲ့ Modulus of Elasticity တစ်နည်းအားဖြင့် Young's modulus ဟာ Es = 29000 ksi ရှိပါတယ်
Poisson's ratio ကတော့ Elastic range မှာ 0.3 in ရှိပြီး plastic range မှာ 0.5in ရှိပါတယ်။
Es & poisson's ratio ကို ဆက်စပ်ထားတဲ့ Shear Modulus of Elasticity, G တန်ဖိုးကတော့ Elastic ranger မှာ G=0.385E ရှိပါတယ်
Poisson's ratio ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဥပမာပေးရရင်တော့
member များဟာ တစ်ဖက်မှာ tension ခံရတဲ့အခါ ကျန်တစ်ဖက်က elongation ဖြစ်လာပြီး (ကျယ်လာပြီး) ကျန်တစ်ဖက်က ကျုံ့ဝင်သွားပါတဲ့ အချိုးလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Elasticity Es နဲ့ G ရဲ့ ခြားနားချက် ကတော့-
1 direction ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ deformation ကို Es နဲ့ တွက်ရပြီး
radial ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ deformation ကို G နဲ့ တွက်ရတာပါ။
Steel Member များကို အဓိက အားဖြင့် Hot Rolled Shape နဲ့ Cold Form ဆိုပြီး (2) မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်...။ Hot Rolled Shpae တွေကတော့Steel Mills တွေကနေ တိုက်ရိုက် ပုံထုတ်ခဲ့တာပါ... Cold Form ဆိုတာတော့ Steel Section တစ်ခုခုကနေ ပြန်ပြီး ပြုပြင် ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ section တွေလို့ပဲ အကြမ်းဖျဉ်း မှတ်ထားလိုက်မိပါတယ်....။
LRFD နဲ့တုန်းကတော့ Hot Rolled Shape တွေမှာ-
1) Wide Flange Shape (W section_ flange thickness ထူ width ကျယ်ပြီး web ပါးတဲ့ section မျိုး)
2) American Standard Beam (S or I or M section_ flange ကျဉ်းပြီး web ထူတဲ့ section မျိုး)
3) American Standard Channel
5) Strucutral Tee
6) Pipe Section
7) Sturcutral Tubing
9) Plate တွေဆိုပြီး မှတ်သားခဲ့ရတာပါ.....
BS code နဲ့ ပြောင်းလဲ မှတ်သားရပြန်တော့ UB တွေ UC တွေ လာတော့တာပေါ့လေ.... ခုတော့
1) Universal Beam
2) Universal Columns
4) Equal and Unequal Angle
5) Structural Tees
6) Hollow Section (Circular, Rectangular, Square) ဆိုပြီး မှတ်သားရပါတယ်...။
Member တွေရဲ့ တစ်ခုချင်းစီ အသုံးအနှုန်းကို လေ့လာကြည့်ရင်.......
- UB တွေကတော့ အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ major axis မှာ ခံရတဲ့ bending moment ကို ထိန်းပေးပါတယ်....။ (S or I or M section မျိုးပေါ့....)
- UC တွေကတော့ "r" ဆိုတဲ့ radius of gyration ပိုကောင်းတဲ့အတွက် axial load ကို resist လုပ်ပေးပါတယ်...ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ minor axisတစ်လျှောက်မှာ ဖြစ်လာမယ့် buckling ကိုတော့ ဂရုပြုပေးရမှာပါ....။
- Channel များကတော့ Beam များ အဖြစ်၎င်း၊ Bracing Member များ အဖြစ်၎င်း၊ Truss Member များ အဖြစ်၎င်း အသုံးပြုလေ့ရှိသလိုCompound Member များအဖြစ် Build-up လုပ်ပြီး သုံးတတ်ပါတယ်.. (ဥပမာ... Open Web Joint တွေလိုပေါ့...)
- Equal and Unequal Angle တွေကတော့ Bracing Member များအဖြစ်၎င်း၊ Truss Member များအဖြစ်၎င်း၊ Purlin များ အဖြစ်၎င်း၊ Side railတွေ Sheeting rail တွေ အဖြစ်၎င်း သုံးတတ်ပါတယ်...
- Structural Tee တွေကတော့ UB တွေကို ပဲ T ပုံစံ cut လုပ်ထားတာပါ..... Truss Member များ၊ Ties များ နဲ့ Light Beam များမှာသုံးတတ်ပါတယ်..
- Hollow Section များကတော့ Hot Roll နဲ့ ရှိသလို Cold Formed လည်းရှီပါတယ်...။ သူကတော့ weight နည်းနည်းနဲ့ stiffinessကောင်းတဲ့အတွက် Compression Member တွေ အဖြစ် ကောင်းကောင်း သုံးနိုင်ပါတယ်...။ အများဆုံးကတော့ Roof Truss များ၊ Lattice Girder များ၊ Building Frame များ၊ Purlin များ နဲ့ Sheeting Rail များမှာ သုံးလေ့ ရှိပါတယ်...။
Member တွေဟာ တစ်ခုချင်းစီ သီးခြား သုံးကြသလိုပဲ.. Compound ဖွဲ့ပြီးလည်း သုံးကြပါတယ်...။
- Universal Beam တွေမှာ Cover Plate တွေကို ထပ်ပိုးပြီးနောက် ( Flange thickness ထူလာပြီး) ပို strength ကောင်းအောင် လုပ်ကြလေ့ရှိသလို.. Channel (2) ခုကို Plate တွေနဲ့ ဆက်ပြီး Web ပို ထူအောင်လည်း လုပ်လေ့ရှိပါတယ်.. ဒါ့အပြင် Flang width ကျဉ်းတဲ့ Beam နှစ်ခုကို Plate နဲ့ ပိုးပြီး Web ရဲ့ ဗျက်ကို ကျယ်စေအောင်လည်း လုပ်တတ်ပါတယ်....။ Crane Girder တွေရအောင် Top Flange ကိုပဲ thickness ထပ်ပိုးတာမျိုးလည်း လုပ်လေ့ရှိပါတယ်...။
- member တွေကို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆက်စပ်ပြီး ( Laced & Battened Member တွေလို... Open Web Joint တွေလို) လိုအပ်တဲ့ Stiffiness ကိုပဲ ရွေးယူတာမျိုးလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်...။ ဒါမျိုးကတော့ အထူးသဖြင့် Roof Truss တွေမှာ ခန်းဖွင့်ကျယ်လာရင် တွေ့ရတတ်ပါတယ်....
- Plater တွေကိုပဲ welding ဆက်ပြီး Plate Girder, Build-up (I or H section), Build-up Box section, Box Column, Box Girder များအဖြစ် compound လုပ်လေ့လည်းရှိပါတယ်...။
အားလုံးကို ခြုံကြည့်လိုက်ရင် member တွေကို သူတို့ရဲ့ section properties များအလိုက်-
Tension Member လား ?
Compression Member လား ?
Bending Member လား ?
Torsion ခံရမှာလား ?
အစရှိတဲ့ design လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်ပြီး (အခြားအခြားသော အချက်တွေလည်း ပါသေးတာပေါ့နော်) ရွေးချယ်ရတာပါ.. ဒီတော့ သူတို့ရဲ့ Section Properties ကို အထူး ဂရုပြုပေးရတာပါ...။ Compound (Build-up) လုပ်တယ် ဆိုတာကတော့ special requirement တစ်ခုခုအတွက် member တွေကို ပေါင်းဖွဲ့ပြီး လိုတဲ့ နေရာလေးကိုပဲ effective ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်တာပါပဲ.. အထူးအထွေ ခက်ခဲတာမျိုးတော့ မရှိပါဖူး.... ဒါပေမယ့် Steel Member လေးတွေ ရင်းနှီးသွားမှပဲ နောင် ဆက်ဖို့က တော်တော် ထိရောက်ခဲ့တာပါ..။